Items 1 to 16 of 1379 total
သေသပ်ခိုင်ခံသော Teak Cabinet
New Look ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းတမျိုးဖြစ် သည့်ဗီဒို TeakCabinetကိုလဲတင်သွင်းဖြန့် ဖြုးရောင်းချပါသည်။TeakCabinetသည့်လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့အဝတ်အစားသာမကအရေးကြီးသောပစ္စည်းများကိုလဲ သော့ခတ်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အဝတ်အစားနှင့်အခြားသောအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက်TeakCabinetကိုဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက New Look ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ခန့်ညားထည်ဝါသော Wallpaper များ
အရည်အသွေးပြည့်မှီ လှပသော နံရံကပ် Wallpaper များကို အသုံးပြုကာ သင့်အိမ်နံရံကို အလှဆင်လိုပါသလား။ခိုင်ခံလှပပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသော Wallpaper များကို အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် နိုင်အောင် တင်ပြ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။မလေးရှား နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးမှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ဆေးသုတ်စရာ မလိုပဲ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာပြီး တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူသောကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေသည်။Classic ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် သင့်အိမ်ကို အချိန်တိုအတွင်း လှပဆန်းသစ်အောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုလျှင် အခုပဲ LAMEX Wallcovering ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် အိမ်ခေါင်းမိုး နှင့် မျက်နှာကျက်များတွင် အလှဆင်တပ်ဆင်နိုင် သော မီးပန်းဆိုင်းများ ( Chandelier )
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အဆောက်အဦးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အိမ်၊ ရုံး၊ ဟိုတယ်တို့ တွင် မီးပန်းဆိုင်းများ ( Chandelier ) များကို အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ ပေးလျက် ရှိပါသည်။ဒါ့ပြင်လူကြီးမင်း တို့ ၏ အ်ိမ်မျက်နှာကျက်များတွင် ၄င်း လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည် မီးပန်းဆိုင်းများကို အလှဆင် နိုင်ရုံသာမက အိမ်ခြံဝင်းအဝင်ပေါက်ရှိ အိမ်ခေါင်းမိုး မျက်နှာကျက်များတွင်လည်း ၄င်း မီးပန်းဆိုင်း များ ( Chandelier )များကို အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အေ နဖြင့် ၄င်းလှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်းသည့် မီးပန်းဆိုင်း ( Chandelier )များကို အိမ်နှင့်အခြား အဆောက်အဦးများတွင် အလှဆင်ရန်အတွက် ဝယ်ယူတပ်ဆင်လိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
အရောင်အသွေးစုံ Wave Granite
Today’s hectic lifestyle needs reflections to bring us back to peaceful; perspectives and it all starts in the environment we live in. We bring you originality and innovation in tile designs, encompassing visions of the ocean, of ripples and waves reminiscent of therapeutic motions on its surface, where the Sun hits. Inspired by the natural veins from Quartzite stone, capturing the right depth and developing on its 3D characteristics, the Wave series is designed to obtain aesthetic value in any interior architectural solution. Wave evokes the ocean at your feet in5versatile shades to reflect individual preferences and personalities
KL MALL SHAN
KL MALL SHAN ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေအိမ် တိုက်တာ အဆောက်အအုံများကို အရည်သွေးမြင့်မား သည့် Aluminium , Glass , Steel တို့ ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပြီး အလှဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လူကြီးမင်း တို့ စိတ်တိုင်းကျ အလှဆင်ပေးလျက်ရှိ်ပါသည်။ ဧရာဝတီဘဏ် အဆောက်အအုံကို သေသပ်လှပစွာ အလှဆင် တည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။အခြားအဆောက်အဦးများကို အလှဆင်လိုပါက သြစတေးလျ ကုန်ကြမ်းများနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တွင် ပုံသွင်း ထုတ်လုပ်ထားပီးတိုက်ရိုက်တင်သွင်း သော Aluminium , Glass, Steel တို့ ကို အသုံးပြုပြီး အလှဆင်တပ် ဆင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို လည်းဆောက်ရွက်ပေး နေပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် အိမ် အဆောက်အဦးများကို အလှဆင်ပြုပြုလိုပါက KL MALL SHAN ကုမ္ပဏီ ကိုတိုက်ရိုက် ဆက် သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
UPVC ပြတင်းပေါက်၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာသုံးတံခါးများ
UE Door &amp; Tily City မှ UPVC ပြတင်းပေါက်နဲ့ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာသုံး တံခါးများဖြစ်ပါတယ်။ 2&#039; 6&#039;&#039; 3&#039;, 3&#039; 3&#039;, 3&#039; 3&#039;6&#039;&#039;, 3&#039; 4&#039;, 4&#039;4&#039;, Size စုံရရှိနိုင်ပါသည်။ UPVC ကုန်ကြမ်းသည် အခြားသော PVC ကုန်ကြမ်းများကဲ့သို့ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်း၊ ကြုံခြင်း ပွခြင်း လုံးဝမရှိသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ တံခါးထုပ်လုပ်ရန် အသုံးပြုထားသော စက်ပစ္စည်းများသည်လည်း နောက်ဆုံးပေါ် Auto စက်များဖြစ်သည့်အတွက် Quality မှာ အခြား Manual စက်များဖြင့်ထုပ်လုပ်ထားသော တံခါးများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Constraction Company များအတွက် - အထူးဈေးနှုန်းများ - အရောက်ပို့စနစ် - After sale service များဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
ရုံးခန်းသုံး ကုလားထိုင် အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်။စုံလည် ကုလားထိုင် ဖြစ်သဖြင့် ထိုင်ရ ထရ လွယ်ကူစေသည်။ညောင်းကိုက်ခြင်း နှင့် အပူဒဏ် ခံနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိသည်။အရည်အသွေး ပြည့်ဝမှုကြောင့် ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
သန့် ရှင်းသေသပ်လှပသော (Lotus Bedstead) ကုတင်
Smart Modern Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်တွင် အသုံးပြုသောပရိဘောဂ ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည့် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော MDF ခေါ်အကျစ်ပြုလုပ်ထားသော ကြိပ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်ကုတင် Lotus Bedstead ကိုတင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။၄င်း Lotus Bedstead ကုတင်သည် ပဒုမ္မာကြာပန်းပုံစံများဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်အသုံးပြုရာတွင် ဒီဇိုင်းဆန်ပီး သန့် ရှင်းသပ်ရပ်လှ ပသော ကုတင်အမျိုးစားပင်ဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Lotus Bedstead ကိုဝယ်ယူလိုပါက Smart Modern Furniture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါ သည်။
သေသပ်လှပသည့် ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော စားပွဲ ( Teak Table )
Sweet Home Class Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက်အရည်သွေး ကောင်းမွန် သော ကျွန်း သစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် စားပွဲများကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူးေ ရာင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်း စားပွဲ ( Teak Table ) များသည် လှပ ပီးသပ်ရပ်သည့်အပြင် ဒီဇိုင်းလည်းဆန်းေ သာကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အသုံးပြုသင့်သော အိမ်သုံးပရိဘော ဂပစ္စည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ပြင် ၄င်းစားပွဲ ( Teak Table ) ကို ထမင်းစားပွဲများ အနေဖြင့်လည်းကောင်း ကော်ဖီစားပွဲများအနေဖြင့်လည်းကောင်း အခြားပစ္စည်းများ တင်ထား နိုင်ရန်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သော ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိူးဖြစ်ပါသည် ။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်လည်း ၄င်းကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စားပွဲ (Teak Table ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Sweet Home Class Furniture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ခိုင်ခံ့ သပ်ရပ် လှပပီး သက်သောင့် သက်သာ ရှိသော အိပ်ယာ ကုတင် ( Single Bed Stead )
120000 ~ 200000 Kyats
Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦး ၊ ဟိုတယ် တို့ ၏ အိပ်ခန်းတွင် အသုံးပြုသော အိပ်ယာ ကုတင် ( Single Bed Stead ) ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း အိပ်ယာ ကုတင် သည် ခိုင်ခံ့သပ် ရပ်လှပ ပီး ကြာရှည် အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း ကုတင်သည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦးများ၏ အိပ် ခန်းများတွင် အသုံးပြုသင့်သော စတီးလ် ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သော ကုတင် ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ကုတင် ( Single Bed Stead ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Golden Rose Furniture ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Somany GVT/Duragres Vitrified Digital Floor Tile Dolcetto Bone 600 X 600 mm- ကြွေပြား
7900 ~ 7900 Kyats
ရေဒဏ်နှင့်အပူဒဏ်ကို အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည် ရှိပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် နေ အိမ်များအတွင်း အသုံးအများဆုံးပစ္စည်း တမျိုးဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် ရောဂါကာကွယ်ရန်၊တစ်ကိုယ်ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးအတွက် များစွာအကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
Star Home ကုမ္ပဏီမှ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ရေချိုးခန်း (bath room) ဘေစင် (basin) သန့် စင်ခန်း (toilet) စသည်တို့ ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ ၄င်းရေချိူးခန်းသုံးပစ္စည်းများမှာ အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး American Standard ဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်းညီညွတ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတ်ို့ အနေဖြင့် ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စ ည်းများဖြစ်သည့် ရေချိုးခန်း (bath room) ဘေစင် (basin) သန့် စင်ခန်း (toilet) စသည့် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်းသင့်တော်သော အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်း များကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Star Home ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါ သည်။
Be mesmerized by the fascination of Step, the masculinely charming magnetizer by Niro Granite. Designed exclusively for outdoor application, Step takesapage out of the distinctive natural limestone that evokes the sense of dominance and sophistication. Step is obtainable in structured surface withaspectacular thickness of 20mm to create an outdoor environment with character and candour. Present in an extensive variation of two stunning dusky colours, Step is the ultimate manifestation of superiority marking it completely, and uniquely different.
Kyi Myanmar Tun ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်းသစ် များ ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် မှန်တင်ခုံ ( Dressing Table )ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါ သည်။ ၄င်းပစ္စည်းများသည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် အပြင် ကျွန်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကြာရှည် အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း မှန်တင်ခုံ၏ အောက်ဘက်တွင် အခြား ပစ္စည်းထည့်သွင်း သိမ်း ဆည်းနိုင်သည့် အကန့် များလည်းပါဝင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ကျွန်းမှန် တင်ခုံ ( Dressing Table )ကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုလိုပါက Kyi Myanmar Tun ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။